रास्ट्रिय जनवार हो भन्दैमा गाई नखाने कुरै भएन :आङकाजी शेर्पा – Todays Nepal
पहिचानवादी नेता आङकाजी शेर्पाको नाम अहिले पनि विभिन्न विषयमा विवादास्पद बन्छ । यतिसम्म कि, फेसवुकमा लेखेको स्टाटसकै कारण प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी १७ दिन कारागारमा राख्यो ।
:पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रनिर्माताको रुपमा स्वीकार नगरे पनि उनले भने झैँ ‘चारजात छत्तिस जातको फूलबारी’ को संरक्षण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
जीवन मंगोल पनि लेख्छन, गाई काटेर खादा हिन्दुलाई आपत्ति किन ?
यो कस्तो कानुन हो ? यो कस्तो संस्कार हो ? यो कस्तो राज्य हो ?
कुन कानुनले छेकेको छ र ? २०७३ माघ २४ गते रामेछाप जिल्लाको बेताली गाविस–३ मा रहेको शेराकाली मन्दिरमा पूजा गरेको विषयमा एक दलित युवा स्थानीय कृष्णकुमार विश्वकर्मालाई मन्दिरमा पूजा गरेको भन्दै पुजारीद्वय छत्रबहादुर बुढाथोकी र भीमबहादुर बुढाथोकीले मन्दिरमा रुद्री लगाएर चोखो नगरी पूजा गर्न नमिल्ने भन्दै पुजारीले कृष्णकुमारसँग पाँच हजार रुपैयाँ माग गरे ।
उनले पुजारी भीमबहादुर बुढाथोकीलाई पाँच हजार दिए । यसरी मान्छेलाई कुकुर भन्दा पनि तल्लो दर्जामा राख्ने समाज अनि गाई राज्यमा बस्दा गाई जस्तो कानुनले सुसज्जित भएर बस्नु पाउनु गाई अवतार लिनु पर्ने देखिएन र ? बाहुनवादी कानुनी राज्यमा मान्छे मार्नु ठूलो कुरा होइन । गाईको मासु खानु महा अपराध हुन्छ ।
साभार- समाचार संसार डट कम बाट
सोमपाल कामी लाई बिदेशी खेलाडी को येस्तो सम्मान ।। हेर्नुस येस्तो छ।।